HAINTRANO TENY ANOSIBE ANDREFANA : OLONA EFATRA NO MATY ARY TRANO 68 LASA LAVENONALa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarFiainam-pirenena MALAGASY PEJY MALAGASYHAINTRANO TENY ANOSIBE ANDREFANA : OLONA EFATRA NO MATY ARY TRANO 68 LASA LAVENONA
HAINTRANO TENY ANOSIBE ANDREFANA : OLONA EFATRA NO MATY ARY TRANO 68 LASA LAVENONA
Telo mianaka ary lehilahy iray mpiara-monina amin’izy ireo no namoy ny ainy noho ilay firehetana trano teny Anosibe Andrefana, afak’omaly alina. Labozia natao jiro tao an-trano no nitarika ny loza ka nahamaizana trano 68
Nandravarava indray ny lelafo. Ankohonana iray sy olona mpifanolo-bodirindrina amin’izy ireo no lasa lavenona noho ny haintrano govana niseho teny Anosibe Andrefana, tao ambadiky ny tsena, afak’omaly alina nanodidina ny tamin’ny 11ora.
“Mpivady sy ny zanak’izy ireo no telo tamin’ireo olona tra-doza nandritra ity firehetana trano nahatsiravina ity. Fatin-dehilahy iray, izay mpiara-monina amin’izy ireo ihany koa anefa no hita afaka am-polony metatra ny tranon’io fianakaviana ringana io”, raha ny tatitra voaray avy eo anivon’ny Sampana mpamonjy voina eny Tsaralalàna.
Raha ny famotoran’ireo mpamono afo dia tao amina trano hazo izay nisy io ankohonana ringan’ny afo io no niandoha ny loza. Rehefa nofotorina ireo mpiray monina tamin’izy ireo dia afon-dabozia nihitatra tamin’ireo entana tao an-trano no ahiana ho niteraka izao voina izao. Nananika tsikelikely ireo trano hazo teo amin’ny manodidina izany. Nahatratra 60 vokatr’izany ireo trano potiky ny afo.
Tsy tapitra teo anefa ny fandravaravan’ny afo fa nanao randran-tarika tany amin’ireo trano biriky teny amin’ny manodidina. Nahatratra 8 no kila tanteraka ary tsy nisy azo noraisina. Olona an-jatony no fantatra fa traboina sy very fananana saingy nisy ihany koa ireo nitondra takaitra nandritra iny firehetana iny.
Nanao vy very ny ainy
Olona telo no fantatra fa naratra noho ny fanavotana ny ainy sy ny an’ny hafa nandritra ity haintrano goavana teny Anosibe Andrefana ity. Renim-pianakaviana iray no nampitain’ny Sampana mpamonjy voina fa naratra noho ny fitsambikinana avy eny amin’ny rihana fahatelon’ny tranobe iray. Olona iray hafa ihany koa no naratra mafy noho ny fanavotana ny ain-janany izay voahodidin’ny lelafo. Ary torak’izany ihany koa ny nahazo ilay raim-pianakaviana izay nanampy ireo mpiara-monina taminy ka nahamaizan’ny faritra teo amin’ny tànany. Manaraka fitsaboana eny amin’ny toeram-pitsaboana avokoa izy ireo hatramin’ny omaly hariva.
Partager la publication "HAINTRANO TENY ANOSIBE ANDREFANA : OLONA EFATRA NO MATY ARY TRANO 68 LASA LAVENONA"